जान्नुहोस् ! यस्ता छन् निद्रामा मानिस झस्किने कारणहरु
जनवरी 7, 2019 जनवरी 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment निद्रा
किन झस्किन्छ मान्छे निद्रामा ? कति जनालाई सुतिरहेका समयमा अचानक झट्का महसुस हुन्छ । कसैलाई गहिरो निद्रामा सुति रहेका बेला अचानक झट्का महसुस हुने गर्छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपयलाई त झट्काकै कारण सुतिरहेको बेलामै पनि तल झरेजस्तो समेत महसुस हुन्छ । चिकित्सकीय भाषामा यस्तो अवस्थालाई हाइपनिक जर्क पनि भनिन्छ । हाइपनिक जर्क न त कुनै शारीरिक समस्या हो, न त कुनै नसा सम्बन्धी रोग नै हो । यो त मांसपेशीले दिने झट्का वा शरीरको झट्का मात्र हो, जुन गहिरो निद्रा परेको केही समयपछि मात्र शरीरले महसुस गर्छ । यसलाई मायोक्लोनिक जर्क पनि भन्ने गरिन्छ ।
← आउने पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाऔ
नमस्कार गर्नुको कारणहरु र महत्व →
One thought on “किन झस्किन्छ मान्छे निद्रामा ?”